महिनाबारी पछि कुन दिन सम्पर्क गर्दा बच्चा बस्दैन ? - jagritikhabar.com
महिनाबारी पछि कुन दिन सम्पर्क गर्दा बच्चा बस्दैन ?
नोट : विभिन्न अनुसन्धानले सुरक्षित र असुरक्षित समय र दिन तोके पनि सबैमा यो लागू हुन्छ भन्ने छैन । सून्य देखि ५ प्रतिशत सम्भावना जहिले पनि रहन्छ । त्यसैले परिवार नियोजनको भरपर्दो साधन अपनाउनु सबैभन्दा भरपर्दो हुन्छ । अर्कोकुरा सेफ से-क्स भनेको गर्भ नरहने समयलाई संकेत गरिएको हो । यसले एचआइभी एड्स तथा अन्य यौ-नरोगको सम्भावनालाई रोक्न सक्दैन ।